बाँकेमा सङ्घीय सरकारको तीन अर्ब बजेट,कुनमा कति ? – Himalitimes
बाँकेमा सङ्घीय सरकारको तीन अर्ब बजेट,कुनमा कति ?
२०७६ जेष्ठ २६ १५:२३ मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज । सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बाँकेका आठ स्थानीय तहका लागि रु दुई अर्ब ९० करोड ११ लाख विनियोजन गरेको छ । सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु एक अर्ब ३२ करोड २३ लाख र सःशर्त अनुदानतर्फ रु एक अर्ब ५७ करोड ८८ लाख विनियोजन गरेको हो ।
बाँकेका अन्य स्थानीय तह पनि बजेट बनाउने र चालू आवको अन्तिम महीना शुरु हुन लागेका बाँकी विकास निर्माणको कामहरु सक्ने गरी व्यस्त भएका छन् ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकाङ्क, पूर्वाधार, खर्चको आवश्यकता, राजश्व क्षमता तथा ती तहमा रहेका आर्थिक सामाजिक तथा अन्य विभेदका आधारमा उक्त अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारले कैलालीमा हावाहुरीबाट ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारलाई एक लाख ५० हजार राहत रकम दिने